सक्छस भने आइजा महापुरुष मलाई बलात्कार गर ! — SuchanaKendra.Com
सक्छस भने आइजा महापुरुष मलाई बलात्कार गर !
माया खत्री, जाजरकोट । यो संसार अचम्मको छ जहाँ महिला एति सम्म हेपिएकी हुन्छिन लाग्छ म त्यो यो जन्ममा किन नारी भएर जन्मिए फेरी परिवर्तन हुन्छ मन । र अनि सोच्छु संसारकै सबै भन्दा महत्वपूर्ण चिज नारी जहाँ आमा शब्द सबैको प्यारो हुन्छ अनि बन्न मन लाग्छ किशोर अबस्थामै आमा र देखाउन मन लाग्छ आमा के हो ,किन आवश्यक छ भनेर । यो एक्काईसौं सताब्दी जहाँ संसारमै चेतनाको विकास भैसकेको छ तर केहि पुरुसमा कहिले चेतना शब्द घुसेन अझै बढ्दो छ महिला हिंसा र बलात्कार । जहाँ महिलामाथि पर-पुरुषले देखाउने पशु ब्यबाहारले बाच्न गाह्रो हुन्छ।
जागिरिको लागि अफिस जाऊ हाकिमको डर ,पढ्नको लागि स्कुल कलेज जाउँ शिक्षकको डर, घाँस दाउरा गर्न जाउँ जंगली पुरुषको डर अनि कसरी भईन महिला स्वतन्त्र नागरिक ? आफ्नो सरिर जोगाउन अब के गरौ ? सक्छौ के तिमी सक्छौ ? सक्छौ भने आऊ मलाई बलात्कार गर । म तिमीले गरेको यो ब्यबहार सहन तयार छु । तिमीले म एउटी नारीलाई बलात्कार गरेर आफुलाई महापुरुषको दर्जामा राख्न सफल हुन्छाै भने म तिम्रो त्यो चाहना पुरा गर्ने छु, तर यो सम्झ कि तिमीले गरेको पापले तिमीलाई जीवनभर पछुतो लाग्ने छ । त्यहि ठाउँमा तिम्रो कोहि थियो भने के हुन्छ तिमीलाई ? आफ्नो दिदीबहिनी दर्जामा राखेर मलाई बलात्कार गर म सहन्छु ।
अब त चिन्ता परिवारबाट नै बढी छ । बिबाह भएकी नारीहरु कुन बेला पतिको अगाडी मृत्युको शिकार हुने हो पत्तो छैन । आफ्नै बाबा दाजु भाईबाट दिदी/बहिनी ,छोरी/बुहारी बलात्कार भन्ने समाचार आउन थालेको छ । जबर्जस्ती चलेको यो देशमा सबथोक जबर्जस्ती हुन् थालेको छ। कहिले बन्छ हाम्रो देश ? र कहिले भन्रन् पाइएला सभ्य देश हो नेपाल भनेर ? दुखको कुरा यो हो जहाँ अन्धकार हुन्छ त्यहाँ अन्धो बनिन्छ बनाउछ । यो सहर/बजारमा हिडिरहेकी महिला बलात्कार भएको खबर जब आउँछ अनि भकानिन्छ मन । जहाँ यी नारीको भबिष्य के हो ? र के थियो भन्ने सोच्दैनन् समाज ।